Video+Sawirro: Duufaantii Ugu Weyneed Oo Ku Dhufatay Gobolka Florida Ee Wadanka Mareykanka.
Sunday September 10, 2017 - 17:43:06 in Wararka by Super Admin
(Rating 2.3/5 Stars) Total Votes: 4
Maamulayaasha wadanka Mareykanka ayaa sheegay in malaayiin qof laga daad gureeyay magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Florida oo kamid ah gobollada ugu waaweyn wadankaasi.
Duufaanta loogu magac daray Irma ayaa ku dhufatay xeebaha Bari ee wadanka Mareykanka waxaana laga cabsi qabaa in duufaantu ay geysato halaag daran oo soo gaara dadka ku nool magaalooyinka waaweyn.
Hay’adda ka hortagga Muusiibooyinka Qaranka Mareykanka ayaa war ay soo raartay ku sheegtay in dad gaaraya 6 Milyan oo qof laga saaray magaalada Miami oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn Florida islamarkaana dadka loo daad gureeyay deegaanno ay ku badbaadi karaan.
Duufaantan oo saacaddiiba jareysa 250KM ayaa lafilayaa in ay burburiso kaabayaasha muhiimka ah waxayna wadataa roobab daadad wata waxaa usii dheer dabeysha duufaanta ayaa xididda siibaysa geedaha waaweyn.
Guddoomiyaha gobolka Florida ayaa dadka uga digay in ay kusii sugnaadaan guryaha dabaqyada ah wuxuuna sheegay in duufaanta Irma ay halaag badan sababi doonto loona baahanyahay in dadku baneeyaan magaalooyinka.
Wariye katirsan Telefeshinka Al Jazeera oo ku sugan magaalada Miami ayaa soo sheegay in dhammaan dadkii magaalada deganaa ay isaga carareen islamarkaan Miami ay isku bedeshay magaalo faaruq ah.
Sawirro lagu faafiyay baraha Internetka ayaa muujinayay bilaawga duufaanta Irma oo soo gaartay xeebaha Bari ee gobolka Florida, hay’adda Musiibooyinka dabiiciga ah waxay sheegtay in duufaanta Irma ay tahay duufaantii ugu weyneed ee Abid soo marta wadanka Mareykanka iyo Jarziirada Karbinka.
Duufaantii Harvey ee todobaadyadii lasoo dhaafay garaacaysay gobolka Taksis ee wadanka Mareykanka khasaarihii ka dhashay wali waa mid taagan dadkii deganaa magaalooyinka ayaa la’a dhaqaale ay dib ugu gurya noqdaan.
Ciidamada Kenya Oo Carruur Ku Xasuuqay Deegaan katirsan Gobolka Gedo.
Baarlamaanka Masar oo soo jeediyay in la xiro Dugsiyada Qur'aanka ee ku yaalla Wadankaas.